Amaqela asekhaya adlale kakuhle kwiSAB League – Grocott's Mail
You are at:Home»SPORT»News»Amaqela asekhaya adlale kakuhle kwiSAB League
By Grocott's Mail Reporters November 9, 2018 No Comments1 Min Read
Lempela veki esiphuma kuyo ibintle kakhulu kumaqela ethu alapha ekhaya adlala kukhuphiswano lweSAB. ICity Pirates ibityelele eQhorha iyokuqubisana neFriendly City, nalapho iye yabuya nodumo ngethuba iphumelela ngamanqaku amabini kwelinye.
Iintshatsheli ezikhuselayo zendebe yenyibidyala iMaru, nayo iqale kakuhle kakhulu ngethuba ibityelele iUnited Eleven yaseBhatisi nalapho ibuye nawo onke amanqaku amathathu ngethuba iphumelela ngamanqaku amabini kwelinye.
Xa sijonga indlela lamaqela omabini aqule ngayo kwelityeli, kukhangeleka ngathi azakuzama ukukhupha nala asemqolo amandla ukuzama ukubuyisa isidima sebhola yalapha ekhaya. Lempumelelo yawo omabini lamaqela yenze bangakwazi ukulinda abalandeli bebhola balapha ekhaya nanjengoko ezakube ehlangene kwidabi lasekhaya kwisithuba nje seveki ezimbini. Abalandeli bazokufumana ithuba lokubona ukuba kuzogquba eyiphi inkunzi apha ekhaya nanjengoko kungagqubi iinkunzi ezimbini esibayeni esinye.
Previous ArticleRoads upgrade stalls
Next Article Springboks wrap